सेमील्ट विशेषज्ञ द्वारा प्रदान गरिएको वेब स्क्रैपिंगको लागि क्रोम स्क्रैपर प्लगइनहरूको सूची
स्प्रिेडशीटहरू र अल्पविराम-विभाजित मानहरूमा वेबसाइटहरू वा वेब पृष्ठहरूबाट डेटा प्राप्त गर्दै (CSV) बनाइएको छ. वेब डाटा निष्कर्षण, सामान्यतया वेब स्क्रैपिंग को रूपमा प्रयोग गरिएको छ, साइटहरु बाट डाटा को ठूलो मात्रा निकालन को प्रक्रिया हो.
क्रोम वेब स्क्रैर को उपयोग कसरि गर्नुहोस
यदि तपाईंसँग कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञान छैन, वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर तपाईंको लागि विकसित गरिएको छ. भर्खरै, वेब स्क्रैपिंगको एक अन्य सजिलो प्रयोग प्रविधि परिचय पेश गरिएको थियो. Google क्रोम ब्राउजरमा नि: शुल्कका लागि जाँदा Google क्रोम ब्राउजर एक्सटेन्सनहरू प्रयोग गरेर, तपाईं अब वेब स्क्रैपिंग कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ विचार गर्न क्रोम एक्सटेन्सनहरूको सूची हो.
स्क्रिन स्क्रैपर एक प्रायः एक्स्क्रिप्ट क्रोम ब्राउजर प्लगइन मध्ये एक हो जुन सामान्य स्क्रिन स्क्रैपिंग को लागि प्रयोग गरिन्छ. शुरुवातका लागी, स्क्रिन स्क्रैपिंग वेब पेजहरु र साइटहरु बाट जानकारी निकालन र निकालन को प्रविधी हो. यदि तपाइँसँग कुनै कोडिङ विशेषज्ञता छैन भने, स्क्रीन स्क्रैपिंगलाई विचार गर्नुहोस् जस्तै प्रक्रिया स्वचालित छ.
स्क्रीर स्क्रैपर क्रोम प्लगइन प्रयोग गरी साइटहरु बाट निकाले गए डेटा या तो JSON वा CSV फाइल को रूप मा डाउनलोड गर्न सकिन्छ. यो प्लगइन XPath र Element चयनकर्ता पैटर्न दुवै समर्थन गर्दछ. पर्दा स्क्रैपर एउटा सजिलो र क्रोम वेब भण्डारमा सजिलै उपलब्ध विस्तार विस्तार गर्न निःशुल्क छ.
वेब स्क्रैपर एक Google क्रोम एक्सटेन्सन हो जुन साइटमैप प्रयोग गरी साइटहरु बाट डेटा निकाल्छ. यो एक्सटेन्सन प्रयोग गरी वेबसाइटहरूबाट डेटा प्राप्त गरिएको हो वा सोही CSV फाइल वा सोचडीबीमा भण्डार गरिएको छ. चित्रण संग, तपाईं बहुविध साइटहरू वा पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न वेब स्क्रैपरलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. अधिकतर अवस्थामा, यो क्रोम ब्राउजर एक्सटेन्सन प्रयोग गरिएको छ लिंकहरू, पाठ र तालिकाहरू जस्ता निकाल्नका लागि.
Imacro वेब स्क्रैपर
iMacro एक क्रोम ब्राउजर हो वेब प्लग र डेटा निकासी को लागि प्रयोग प्लगइन. iMacro भ्रमणहरूमा अन्त-प्रयोगकर्ता कार्यहरू रेकर्ड गरेर कार्य गर्दछ. यो क्रोम ब्राउजर एक्सटेन्सन रेकर्ड वेबसाइटहरू वेबसाइटमा भविष्य सन्दर्भको लागि प्रयोग गरिने. यदि तपाईंको हालको प्रोजेक्ट प्रदर्शन प्रदर्शन वा वेबसाइट रिग्रेसन परीक्षणमा छ भने, यो एक शट दिन प्लगइन हो.
आईमैक्को संग, तपाईं सजिलै संग फाइलहरु लाई डाउनलोड गर्न सक्छन् र आफ्नो पासवर्ड लोजिहरु सम्झ सकते हो. IMacro विस्तार वेब स्टोरमा फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर र क्रोम ब्राउजरको लागि निःशुल्क उपलब्ध छ.
आजकल, वेबसाइटहरूमा राम्रो-दस्तावेज गरिएको जानकारी फेला पार्न सजिलो छैन. यो जहाँ स्क्रैपिंग सफ्टवेयर आउँछ. डेटा खनिज क्रोम ब्राउजर एक्सटेन्सन हो जुन वेबसाईटबाट उपयोगी जानकारी निकाल्न प्रयोग गरिन्छ. यो ब्राउजर प्लगइन प्रयोग गर्दै, तपाइँ साइटहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र डेटालाई Google पानाहरू वा एक्सेल पानाहरूमा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ.
एचटीएमएल तालिकाहरू स्क्रिप्ट गर्न र Microsoft एक्सेल वा CSV फाइलमा जानकारी निर्यात गर्न डेटा खनिज विस्तार पनि प्रयोग गरिन्छ।. यदि तपाइँ XPath चयनकर्ताहरू प्रयोग गरेर एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि ब्राउजर प्लगइन हो.
पछिल्लो केहि वर्षको लागि, एजीएक्स र जाभास्क्रिप्ट जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी गतिशील वेबसाइटहरु बाट डेटा निकाल्दै सजिलो थिएन।. प्रविधिको परिवर्तनको साथ, यी साइटहरूबाट उपयोगी जानकारी स्क्रैप गर्न केवल एक क्लिक टाढा हो. वास्तविक डेटा निकाल्न र CSV फाइल र स्प्रिडसिटमा निर्यात गर्न माथि हाइलाइट गरिएको क्रोम ब्राउजर विस्तारहरू प्रयोग गर्नुहोस् Source .